China CY-7 (Aluminium hanger) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Chengetedza hupenyu hwako
ruvara Champagne goridhe, iron iron, glacier sirivheri
chinangwa Wadhi yekuchengetedza, Hembe kuomesa
1, Yese nzvimbo aruminiyamu inogara kwehupenyu hwese uye izere nesimbi. Haityi kuburitswa-kwenguva refu, kupisa kwakanyanya kupisa, kuchembera uye kupatsanurwa. Nekuti nzvimbo aruminiyamu inorapwa neepamusoro tembiricha oxidation uye nedzimwe nzira dzakasarudzika, haityi kunaya kwemvura, ngura uye chakuvhe.
2, Aluminium chiwanikwa chakakora zvinhu, chakasimba chinotakura chinzvimbo, chinogara kwenguva refu, hachina kusununguka kutsemuka, yunifomu inotakura-15kg, hembe dzinorema dzinorembera zvakanaka.
3) Hanger inogona kushandiswa kuturika mbatya, zvidzimira, mudhebhe, matauro zvichingodaro.
4) Aluminium chiwanikwa chakasimba chirauro, 5mm gobvu dhizaini, yakasimba uye yakagadzikana, yakanyatso riveted nemuviri mukuru weiyo hanger, yakasimba kubereka kugona, kwete kusununguka.
5, Double rukoko akarembera danda, multi-dzichipfekeka design.
6, 20mm yakafutiswa furemu muviri, wakatsetseka usina burr, unogara kwenguva refu, wakasimba kutakura kugona, kwete nyore kuumbika.
7） 28mm yakawedzera arc dhizaini, wedzera iyo yekubatana pamusoro nehembe, zvinobudirira kudzora kuomesa mamaki, kutsetseka pasina mamaki.
Kugadzira: Tine iyi tambo yakakwana yekugadzira, zvese zvishandiso zvinotengwa kunze kwemidziyo, kune yakakosha kudzora, kudzora kwakasimba kwega kwega maitiro ekugadzira, kuona mhando yezvigadzirwa.
Kavha uye zvifambiso:Imwe yeanorembera yedu yakarongedzwa yakazvimiririra kudzivirira mapundu panguva yekufambisa kubva mukukanganisa zvigadzirwa. Yedu yepasi odha zvidimbu mazana matatu nemakumi matatu, ndiko kuti, imwe kesi.
Chengetedza: Nekuti hanger dzedu dzakagadzirwa nealuminium alloy, hadzitye tembiricha yakakwira uye hadziite ngura, saka kana tichifanira kudzishandisa mazuva ese, isu tinongoda kudzipukuta neyakajairika tauro.
Mushure mekutengesa:Tinogona kuvimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvine 99% yekupasa mwero. Kana iwe uine chero mhinduro kana mazano pane zvigadzirwa zvedu, iwe unogona kutibata nesu zvakananga neemail, uye isu tinozozvidzorerazve ivo iwe pane inotevera kutumira.
Pashure: CY-8 (Toilet rack)
Zvadaro: CY-6 (Aluminium hanger)